Gbasara Anyị - Beijing IWHR Corporation (BIC)
Ahịa azụmahịa na-ekpuchi:
BICtumadi na-arụ ọrụ na nnyocha metụtara oru ubi dị ka esenidụt na mba mmiri na mmiri na hydropower, nkwurịta okwu, ike, ụgbọ okporo ígwè, ọchịchị engineering, ewu wdg; Injinia nyocha na imewe, iwu ihe, nlekọta, nyocha na nyocha, nyocha na nyocha, EPC; nnyocha na mmepe, n'ichepụta na ọrịre nke ọhụrụ engineering ihe, nlekota oru na ọmụma dabeere na usoro, na mmiri ọgwụ na ngwá, na electro-n'ibu akụrụngwa; na-ejikwa onwe gị ma na-ahụ maka ibubata na mbupụ azụmahịa nke ụdị ngwaahịa na teknụzụ niile.
Nye ndụmọdụ imewe, zuru ezu set, akụrụngwa echichi oru ngo na mgbe-sales ọrụ nke obere na-ajụ-sized mmiri Conservancy engineering oru; Design, n'ichepụta na echichi nke roba dams, haịdrọlik lifs dams;
BIC bụ onye na - eweta ngwa ngwa ngwa ngwa mmiri na ihe owuwu na China ma nwee ndị otu ọkachamara nke ndị na - emepụta ihe, injinia na ndị ọrụ njikwa. Anyị na-enyekwa ndụmọdụ gbasara ọrụ na ọrụ na injinia, Procurement and Construction (EPC) na mpaghara ndị a: ọgwụgwọ ọgwụgwọ obodo (ETP), ọgwụgwọ mmiri mmiri na-arụ ọrụ (mmiri mmiri na-ekpo ọkụ, mbipụta na ịchacha mmiri mmiri, mmiri mmiri na-egbu mmiri, na mmiri ọgwụ kemịkal) , oru mmiri na oru nke mmiri di iche (arsenic water, fluorinated water, forum- manganese water and brackish water) .Mgbe ọtụtụ afọ nyochachara, BIC ewepụtala usoro ọgwụgwọ mmiri metụtara ya gụnyere: Ultra Filtration (UF) ), Ndabere Osmosis (RO), Membrane Bioreactor (MBR), Mmiri Ọwara Mmiri, Mwepụ Mmanụ na Osisi Ọgwụ Na-ebu Mmiri, na Mgbapụta Vegbọ Ala Na-ekpochapu Mberede. Ngwaahịa ndị a bụ mgbanwe na enwere ike nweta ya na oke ego.
Nbubata & Mbupụ Ahia
Jikwaa mbubata na mbupụ nke ụdị ngwaahịa dị iche iche kwekọrọ na atumatu steeti ma ọ bụ na-enweghị onwe ya ma ọ bụ dịka onye ọrụ;